Ogaden News Agency (ONA) – Baaq ku socda dhalinyarada uu hubeeyay gumaysiga
Baaq ku socda dhalinyarada uu hubeeyay gumaysiga
Posted by ONA Admin	/ September 30, 2012
Xarunta Dhexe ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya
Xasuuqa uu gumaysiga Itobiya ku hayo shacabka S.Ogadenya oo caalamka si dhab ah u ogaaday hadda, ka dib markii laga daawaday TV-yada caalamka, waxay muujinaysaa inay Itobiya ku fashilantay ololihii uu ku dhawaaqay KT Meles Zanawi 2007dii inuu ku soo afjari doono muddo kooban halganka Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya.
Xasuuqa iyo xadgudubka ay Itobiya ku hayso shacabka S.Ogadenya kama aanay gaadhin guushii ay ka filaysay ee ahayd in shacabka uu joojiyo taageerada uu u hayo JWXO.
Waxaa la soo gaadhay waqtigii ay S.Ogadenya aayahooda ka tashan lahaayeen. Waxaa la soo gaadhay waqtigii uu shacabka ku midoobi lahaa halganka xaqqa ah. Waxaa la soo gaadhay waqtigii lala xisaabtami lahaa gumaysiga iyo kuwa u adeegaya ee ka dhaga adeyga baaqa loo fedinayo.
Iyadoo ay isbadala badan ka socdaa guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan gumaysiga Itobiya dhexdiisa, ayay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ugu baaqaysaa dhamaan dhalinyarada beenta loo sheegay ee hubka lagu laynayo shacabka loo dhiibay inay ka waantoobaan oy ka tawbad keenaan inta ay goori goor tahay, taasoo u furi doonta baal cusub oon dib loo raadraacin dambiyada ay u gaysteen shacabka iyo halganka.
Waxaan soo dhaweynaynaa dhalinyaradii ka soo goosatay Hawaarinta (Liyu-Bolis) ee ku soo biiray N/hurayaasha CWXO ee doortay inay Ilaahay iyo shacabkooda u soo noqdaan inta aanay nafta ka bixin ama lagu dilin iyagoo la socda gumaysiga cadawga ku ah dalka iyo dadka iyo diinta islamka intaba.
Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dadka u shaqaya gumaysiga ee taageeraya dulmiga uu gumaysiga ku hayo ehelkooda inay ka waantoobaan oy ka shaqeeyaan talaaba kasta oo fashilinaysa shirqoolada gumaysiga ee ku dhisan kala qaybi oo xukun.
Guusha Goabnimadoonka ayaa iska leh.